संसदिय व्यवस्था खतम गर्नुपर्छ - ढोरपाटन पोष्ट
२०७७ चैत्र ५, बिहीबार ०६:५५
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले ७ दशक पार गर्दा पनि गुणात्मक परिवर्तन लिन सकेको छैन । ससदिय व्यवस्था भित्र नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन रोमलिएको छ । टुट-फुट र वैचारिक स्खलनसङ्गै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेको छ । वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा भएको अवस्थामा वर्तमान सत्तारुढ दल नेकपा(नेकपा) ले कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डामुनि सरकार चलाइरहेको छ । नाम नेकपा(नेकपा) र झण्डा कम्युनिस्ट पार्टीको बोकेर दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्गको रक्षामा नेकपा(नेकपा) ले आफ्नो पूरा शक्ति लगाएको छ । यो विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नै कम्युनिष्टको नाममा साम्राज्यवादका गुलामहरुले गर्दै आएको हर्कतको निरन्तरता हो ।
आजसम्मको ईतिहास वर्गसंघर्षको ईतिहास हो । वर्गहरु बिचको निरन्तरको लडाइले मानव समाज विभिन्न चरणहरु पार गर्दै वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगेको छ । जहिलेसम्म वर्गविहिन समाजको निर्माण हुनेछैन, त्यो वेलासम्म वर्गसंघर्ष अनिवार्य चलिरहनेछ । एकधुर्बिय वर्तमान पुजिवादी भुमण्डलीकृत विश्व व्यवस्थाले शोशक वर्गलाई सङरक्षण गरेको छ र शोषित वर्गलाई सधैं पेलिरहेको छ । यो अस्थायी स्थिती हो ।
विश्वभरीका पुजिवादीहरुले आफुलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार मात्र वताएका छैनन, पुजिवाद नै निर्विकल्प व्यवस्था भएको वताइरहेका छन । पुजीवादीहरुले विश्वमा समाजवाद अब कहिल्यै नआउने झुटो प्रचार गरिरहेका छन । तर, स्वयम् उनिहरुले नै समाजवादको आधार तयार पारेको विषयमा भने उनिहरु केही बोलेका छैनन । समाज व्यवस्थाको विकासको क्रममा पुजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र समाजवादको विश्वव्यापी विजव अवश्यम्भावी छ भन्ने तथ्यलाई उनिहरुले तोडमरोड गरिरहेका छन र मानवतालाई धुलिसात गर्दै विश्वभरी युद्व र विनासमा पुजिवाद मरिहत्ते गरेर लागेको छ ।
विश्वभरी नै हिंसा, आतंक, आतंकबाद, अन्याय-अत्याचार जन्माएर हुर्काइरहेको र तिनिहरुको सङरक्षण गरिरहेको पुजिवाद नढालिकन मानव जातीको मुक्ती सम्भव छैन । शान्तीको नाममा द्वन्द्वको खेती गरिरहेका पुजिवादीहरुले आफ्नो मृत्युुको खाडल पनि आफै खन्दै गएको कुरालाई अस्विकार गरेका छन । समाजमा चल्ने वर्गसंघर्षले अन्याय, अत्याचार, विभेद, हिंसा, आतंकको आधारमा बाचिरहेको पुजिवादलाई नष्ट गर्नेछ र नयाँ समाज व्यवस्थाको स्थापना गर्नेछ ।
संसदिय व्यवस्था पुजिवादको आधार हो । शान्तिपुर्ण प्रतिस्पर्धाको नाममा, लोकतन्त्रको रक्षा र मानव अधिकारको नाममा, रास्ट्रीय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तालाई वलि चढाउन समेत पछि नपर्ने व्यवस्था संसदिय व्यवस्था हो ।
ससदिय व्यवस्थामा न प्रजातान्त्रिक पद्धति हुन्छ न मानव अधिकार र रास्ट्रीय सार्वभौमसत्ताको रक्षा । ससदिय व्यवस्थाले सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुजिवादको सेवा गर्दछ । जनताको मतलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर कमिसन र भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा ससदिय व्यवस्थाले पौडी खेल्दछ ।
विश्वभरी नै ससदिय व्यवस्थाले जनमतको नाममा वास्तविक लोकतन्त्र, मानव अधिकार, न्याय, शुशाशन र मानवताको गला रेटिरहेको छ । त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान परिस्थिति र सरकारको नारा र कार्यशैलीलाई मात्र विचार गर्ने हो ससदिय व्यवस्था कति घिनलाग्दो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएर चुनावमा बहुमत लिएको नेकपा(नेकपा) सरकारले दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्गको हित रक्षामा काम गरिरहेको छ । भारतिय विस्तारवादले नेपाली भुमी कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतको नक्सामा सामेल गर्दा समेत सरकारले कुनै कदम चालेन । नेपाललाई युद्धभुमीको रुपमा परिणत गरेर चिनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी योजना एमसिसी पारित गराउन वर्तमान नेकपा(नेकपा) को सरकारले अनेकै हथकण्डाहरु अपानाइरहेको छ जुन नेपालको रास्ट्रीय सार्वभौमसत्ता माथी नै गम्भीर घातक छ । माहाकाली सन्धी गर्दा अर्बौं रुपैयाँ वार्षिक रुपमा नेपालमा आउने वताएर महाकाली सन्धी पास गराउने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि ले नै अहिले नेपालको रास्ट्रीय सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध रहेको अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तरगतको एमसिसी पारित गराउनको लागि गरेको अनेकौ प्रयत्न केवल सयोग मात्र होइन । यो नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्धको कदम हो ।ससदिय व्यवस्थाको विषेशता हो ।
कालो बजारि, महङ्गी, भ्रस्टाचार अनियन्त्रण रुपमा बढेको छ, जनताका दैनिक समस्याहरु दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन । सबै पार्टीका तल्लो तहका नेता/ कार्यकर्ताहरु पनि कमिसनमा डुब्दै गएका छन । सत्तारुढ दलले जनताका दैनिक समस्याहरुको समाधानमा होइन, साम्राज्यवादि मुलुकहरुको हितरक्षाको लागि आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ । यो स्पष्ट रुपमा ससदिय व्यवस्थाको घिनलाग्दो रुप हो ।
सारा विश्व नै कोरोना भाइरसले विक्षिप्त बनेको अवस्थामा, मन्त्रीहरुले ‘भविष्य’ सोचेर भ्रस्टाचार गरिरहेछन । यो भन्दा घिनलग्दो अवस्था नेपाल र नेपालीका लागि के हुन्छ? मृत्यु सबैको अवश्यम्भावी छ, तर विपतमा मौकाको फाइदा उठाउनेहरुलाई भविष्यको जनक्रान्तिले माफी दिनेछैन । वर्तमान ससदिय व्यवस्थाका घिनलाग्दा रुपहरु दिनप्रतिदिन छर्लङ्ग हुँदै गएका छन । वैशाख ८ गतेको राजनितीक दल सम्बन्धि र सवैधानिक परिषद सम्बन्धी सरकारको अध्यादेश लोकतान्त्रिक मुल्य-मान्यता माथी कै प्रहार हो । यो ससदिय व्यवस्थाको घिनलाग्दो छलकपट हो ।
सिमानामा आएर तड्पिरहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुको उद्दार गर्नु सरकारको दायित्व हो । उनिहरुले आफ्नो जिवनको बाकी जिवनको आशा राखेर नै देश फर्किएका हुन । उनिहरुलाई सरकारले सिमानामा थुन्ने जुन हर्कत छ, त्यो गलत छ । त्यस प्रकारको सरकारको गलत हर्कतलाई किनाराको फड्के साक्षी बसेर ताली बजाउनेहरुलाई पनि भविष्यले त्यसै छाड्ने छैन । कोरोनाले श्रीजना गरेको त्यसप्रकारको समस्या समाधान गर्न छाडेर यो गम्भीर परिस्थितिमा असान्दर्भिक अध्यादेश जारी गरेर लोक लज्जित बनाउने सरकारले सिमानामा विपतमा फसेका नागरिकलाई उद्दार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छ । त्यो पनि गर्न नसक्ने के सरकार भयो ? अझ ‘वामपन्थी’ यो भन्दा लज्जास्पद के हुन्छ अरु ?
कोरोना परिक्षण सामाग्री र पिपिइमा भ्रस्टाचार गर्नेहरु जोसुकै होउन, तिनिहरु देशद्रोही हुन । जनताका सत्रु हुन । कोरोनाको सामना गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा केन्द्रीय समिती वा ससदिय दलमा ४०% मत जुटाएर नयाँ दल दर्ताको लागि वैधानिक बाटो खोल्ने वर्तमान ओलि सरकारको यो कार्य विश्वमा बढ्दै गएको ट्रम्प-मोदि फासिष्ट हर्कतको नेपालि आयम हो । विश्व महामारीको अवस्थामा पनि ससदिय व्यवस्था कतिसम्म जनविरोधी र शाशक पक्षधर हुन्छ भन्ने प्रमाण वर्तमान सरकारले दिनप्रतिदिन चालेका मजदुर-किसान विरोधी गतिविधि र निर्णयहरुले स्पष्ट गरेका छन । वर्तमान ससदिय व्यवस्थालाई खतम गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना नगरेसम्म नयाँ ओलिहरुले यसप्रकारको गैरजिम्मेवार कार्य गरिरहन्छन । ससदिय व्यवस्था खतम गरौं, समाजवादी व्यवस्थाको लागि सघर्षको गतिलाई वेगवान बनाऔं ।
त्यहाँ मार्क्सवाद-लेनिनवादको कुनै गन्ध छैन। मार्क्सवादी आचरण र व्यवहार उनिहरुको लागि धेरै टाढाको विषय भयो । मजदुर किसानहरुको पिर मर्काले उनिहरुलाई कतैबाट पनि छुन्न । छुन्छ त केवल दलाल तस्करहरुको पिरमर्काले मात्र छुन्छ । अब हामीले एउटा विधेयकको छलफल होइन, समग्र व्यवस्था बदल्ने छलफल गरौं । दलालहरु फुटुनु जुटुन, हाम्रो चिन्ता छैन । क्रान्तिकारीहरु एकजुट हुनुपर्छ । विधेयक होइन व्यवस्था नै बदलिनेछ । त्यो दिशामा अगाडि बढौ ।
ओलीले पुर्वाग्रह राखेर गुटको सुरुवात गरे। माधव नेपाल